नेकपामा फेरि केन्द्रीय सदस्य थपिने « Naya Page
नेकपामा फेरि केन्द्रीय सदस्य थपिने
प्रकाशित मिति : 11 September, 2019 9:06 am
काठमाडौ, २५ भदौ : डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टी उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीमा बिलयपछि त्यो पार्टीमा नगएका पूर्वमाआोवादीका नेता र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा छाडेका ४ नेतालाई नेकपाले केन्द्रीय सदसयमा मनोनीत गरेको छ ।
२०७६ भदौ ९ मा नेकपाले देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, पद्म राई र किरण राईलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो । यो सँगै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको संख्या ४ सय ४५ सदस्यीय भएको छ । पार्टीको विधानमा पार्टी एकता प्रक्रियामा सामेल भएका मध्येबाट १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्यमा समावेश गर्न सकिने प्रावधान अनुसार उनीहरु मनोनीत भएका हुन् ।
धमला र पराजुली बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा थिए । नयाँ शक्तिले फोरमसँग एकता गरेपछि नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यस्तै पद्म र किरण विप्लव छोडेर नेकपामा आएका हुन् ।
अर्को पार्टीबाट आएकाहरु केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भए पनि पार्टीमा लामो समयदेखि रिक्त भएको केन्द्रीय सदस्य पदमा अझै मनोनीत हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य बद्री न्यौपानेबिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त छ ।
समीम मियाँ अन्सारी मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष भएपछि अर्को केन्द्रीय सदस्य पद पनि रिक्त छ । केन्द्रीय समिति गठन गर्दा पार्टीमा लामो इतिहास र योगदान भएकाहरुलाई नसमेटिएकोमा पूर्वएमालेभित्र असन्तुष्टी कायमै छ । उनीहरुलाई समेट्ने आश्वासन पनि नेताहरुले दिइरहेका छन् । तर अर्को पार्टीबाट आउनेलाई मनोनीत गर्दा पनि उनीहरु अटाउन सकेनन् ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री उपचारका क्रममा सिंगापुरमा भएकाले मनोनीत हुन नसकेकाले अब छिट्टै मनोनीत हुने बताइएको छ । पूर्व एमालेमा लामो योगदान भएका पुरुषोत्तम पौडेल, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, सोभियत ढकाल, योगेन्द्र शाही, कृष्ण पौडेल, राजनारायण साहहरु नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा अटाउन सकेका छैनन् । बद्री न्यौपानेजस्ता सून्य जनाधार भएकालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर राम्रो आधार भएका राजनारायण साहहरु अन्यायमा पारिए । युवा विद्यार्थीका बीचमा निरन्तर काम गर्ने सोभियत ढकाल त पटक पटक अन्यायमा पारिएका छन् ।
एमाले–माओवादी एकताका बेला युवानेता सोभियत ढकालको नाम काटेर न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचन मण्डलका प्रमुख सोमनाथ प्यासीले उनलाई ८ सय ८६ मत प्राप्त गरी केन्द्रीय सदस्यमा बिजयी घोषणा गरे । उनीभन्दा ७ मत कम पाएका खेम लोहनीलाई भोलिपल्ट बिजयी घोषणा गरिएको थियो ।
अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगले ढकालको मत ८७६ र लोहनीको ८७९ मत पाएको घोषणा गरेको थियो । तर रातारात उनको मत घटी देखाएर लोहनीलाई बिजयी घोषणा गरिएको थियो । पार्टीले स्याङ्जामा प्रदेश सभाको टिकट पाए जित्न सक्ने उनलाई नदिदा कांग्रेसको पोल्टामा पुगेको थियो । यो पटक ढकालदेखि डा. भट्ट, पौडेल, साह, शाहीहरुले न्याय पाउलान् कि गुटको शिकार हुने हुन् त्यो भने पार्टी शीर्षनेताहरुकै तजबिजमा छ ।